Exchange bụ Ugbu a na Recovery Mode
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Exchange bụ Ugbu a na Recovery Mode
Ozi zuru ezu banyere "Exchange bụ ugbu a na ọnọdụ Iweghachite" Ozi
Microsoft Outlook 2003 na ụdị ndị ọhụụ webatara atụmatụ ọhụrụ akpọrọ Cached Exchange Mode, nke bụ n'ezie ụdị nke mpịachi na-anọghị n'ịntanetị na nsụgharị ochie nke Outlook. Cached Exchange Mode na-enye ọtụtụ ọrụ iji mee mmekọrịta na arụmọrụ na-anọghị n'ịntanetị nke ọma na nke ọma. Otu n’ime ha bụ Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe.
Mgbe Exchange nkesa na-, nchekwa data, ma ọ bụ igbe akwụkwọ ozi na-akpakọrịta na folda na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ emegharịrị, ma ọ bụ enwere esemokwu n'etiti igbe ozi Exchange na OST faịlụ, mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ị na-agba Outlook 2002 ma ọ bụ nsụgharị ochie, ma ọ bụ na-agba Outlook 2003 na nsụgharị ndị ọhụrụ mana nwere Cached Exchange Mode nwere nkwarụ, wee họrọ ịrụ ọrụ n'ịntanetị, mgbe ahụ Outlook ga-emepụta ọhụụ OST faịlụ maka igbe akwụkwọ ozi ọhụrụ. Nke ochie OST faịlụ agaghị ehichapụ, mana ịnweghị ike ịnweta data dị na ya. Mgbe e mesịrị mgbe mbụ igbe akwụkwọ ozi dị ọzọ, ị ga-enwe ike ịnweta data na ochie OST faịlụ, ma ndị ọhụrụ OST faịlụ ahụ agaghị enwe ike ịnweta ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta data na abụọ OST faịlị, ịkwesịrị iji aka dezie profaịlụ Outlook iji weghachite ha na nke kwekọrọ OST faịlụ, nke na-adịghị mma.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eji Outlook 2003 na nsụgharị ndị ọzọ, na Cached Exchange Mode na-nyeere, ị ga-ahụ ndị na-esonụ ịdọ aka ná ntị ozi mgbe gị Exchange igbe akwụkwọ ozi dị na-tọgharịa ma ọ bụ ekwekọghị:
Mgbanwe dị ugbu a na ọnọdụ mgbake. Nwere ike ijikọ na ihe nkesa Exchange gị site na iji netwọk, rụọ ọrụ na ntanetị, ma ọ bụ kagbuo logon a.
nke na-egosi Outlook na Exchange dị ugbu a Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe.
Mgbe Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe, ị nwere nhọrọ abụọ:
Ọnọdụ na-anọghị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ịhọrọ Na-anọghị n'ịntanetị Ọrụ, ị nwere ike ịnweta data na ochie gị OST faịlụ, ma ọ bụghị na ihe nkesa na Exchange. Nke ochie OST faịlụ ahụ ka nwere ike ịnweta na ọnọdụ offline.
Ọnọdụ ntanetị. Ọ bụrụ na ịhọrọ jikọọ, ị nwere ike ịnweta ihe nkesa Exchange, mana ọ bụghị nke ochie OST faịlụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta data na ochie OST faịlụ, ị nwere ike wepu exit Outlook na start ọzọ na Ọnọdụ na-anọghị n'ịntanetị.
Ya mere, site na ịhọrọ nhọrọ dị iche iche, ị nwere ike ịnweta ochie OST file ma ọ bụ ọhụrụ igbe akwụkwọ ozi dị na Exchange nkesa na-ahọrọ.
In Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe, ị nwere ike tọghata ndị ochie OST faịlụ n'ime faịlụ PST iji kwaga data ya na igbe ozi Exchange ọhụrụ.
Ọ bụrụ na mgbe e mesịrị ochie Exchange igbe akwụkwọ ozi dị na-akpakọrịta na nke ochie OST faịlụ dị ọzọ, wee họrọ jikọọ, ị ga-apụ Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe akpaghị aka.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na igbe akwụkwọ ozi adịghị adị kpamkpam, ma ọ bụ na o kwekọghị na nke ochie OST faịlụ ruru ka OST faịlụ ire ure, mgbe ahụ, ka ụzọ Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe ma mee ka Outlook rụọ ọrụ ọzọ? N'okpuru ebe a bụ azịza ya.
Wepụ Exchange Recovery Mode na-arụ ọrụ Nọmalị ọzọ:
Ọ bụrụ na igbe ozi Exchange adịghị maka mgbe ọ bụla, ma ọ bụ na ọ ekwekọghị na nke ochie OST faịlụ n'ihi nrụrụ faịlụ, biko biko mee ihe ndị a iji pụọ Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe ma kwe ka Outlook rụọ ọrụ ọzọ:
Mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike ịnweta ochie OST faịlụ.
Chọta ochie OST faịlụ. Ị nwere ike iji search rụọ ọrụ na Windows iji chọọ maka OST faịlụ. Ma ọ bụ chọọ na predefined ọnọdụ maka faịlụ ahụ.
Napụta data na-anọghị n'ịntanetị na ochie OST faịlụ. Nke ochie OST faịlụ ahụ nwere data na-anọghị n'ịntanetị, gụnyere ozi ozi na ihe ndị ọzọ niile, na igbe akwụkwọ ozi Exchange gị ochie, nke dị gị mkpa. Iji zọpụta data ndị a, ị ga- ojiji DataNumen Exchange Recovery i scanomi ochie OST faịlụ, weghachite data dị na ya, wee chekwaa ha na faịlụ Outlook PST nke mere na ị nwere ike ịnweta niile ozi na ihe na Outlook mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Ndabere ochie OST faịlụ. Maka nchekwa, ị ga-akwado ya nke ọma.
Gbanyụọ Cached Exchange Mode.5.1 Start.
5.2 Na Ngwaọrụ menu, pịa Akaụntụ E-Mail, pịa Lelee ma ọ bụ gbanwee akaụntụ e-mail dị adị, wee pịa Osote.
5.3 Na Usoro Outlook na-e-mail maka akụkọ ndị a na usoro ndị a ndepụta, pịa Exchange Server e-mail na akaụntụ, wee pịa Change.
5.4 N'okpuru Microsoft Exchange Server, pịa ikpochapụ ihe Jiri Cached Exchange Mode igbe igbe.
5.5 Wepụ Outlook.
Kpọgharia aha ma ọ bụ hichapụ ochie OST faịlụ.
Gbanwuo Cached Exchange Mode.7.1 Start.
7.2 Na Ngwaọrụ menu, pịa Akaụntụ E-Mail, pịa Lelee ma ọ bụ gbanwee akaụntụ e-mail dị adị, wee pịa Osote.
7.3 Na Usoro Outlook na-e-mail maka akụkọ ndị a na usoro ndị a ndepụta, pịa Exchange Server e-mail na akaụntụ, wee pịa Change.
7.4 N'okpuru Microsoft Exchange Server, pịa iji mee ka Jiri Cached Exchange Mode igbe igbe.
7.5 Wepụ Outlook.
Tugharia ohuru OST Njikwa. Debetart Outlook ma hụ na ntọala maka akaụntụ Exchange mailbox ọhụrụ na Outlook ziri ezi, na Outlook nwere ike ijikọ na ihe nkesa Exchange gị nke ọma. Mgbe ahụ zipụ / nata ozi ịntanetị gị na igbe ozi Exchange Exchange kwekọrọ, nke ga-ekwe ka Outlook mepụta faịlụ folda na-anọghị n'ịntanetị na-akpaghị aka ma mekọrịta data ya na igbe ozi Exchange. Ọ bụrụ na usoro a anaghị arụ ọrụ, mgbe ahụ ozi profaịlụ gị ugbu a ezighi ezi, ma gị ga-ehichapụ ya ma mepụta nke ọhụrụ, dị ka ndị a:
8.1 Mechie Microsoft Outlook.
8.2 Pịa Start, wee pịa Ogwe njikwa.
8.3 Pịa Gaa na Nlele Omuma ọ bụrụ na ị na-eji Windows XP ma ọ bụ nsụgharị dị elu.
8.4 Pịa ugboro abụọ mail.
8.5 Na Mbido Ozi igbe, pịa Gosi profaịlụ.
8.6 Họrọ otu profaịlụ na-ezighi ezi na listi ma pịa wepụ iwepu ya.
8.7 Tinyegharịa 8.6 ruo mgbe ewepụrụ profaịlụ niile na-ezighi ezi.
8.8 Pịa tinye iji mepụta profaịlụ ọhụrụ ma gbakwunye akaụntụ email dịka ntọala ha dị na ihe nkesa Exchange.
8.9 Start Outlook na megharịa ya mekọrịta igbe akwụkwọ ozi Exchange gị, ị ga-apụ Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe.
Mbubata data natara na nzọụkwụ 3. Mgbe ịpụpụ Ọnọdụ Iweghachite Mgbanwe, debe nke ọhụrụ OST faịlụ maka igbe akwụkwọ ozi Exchange mepere, wee mepee faịlụ PST mepụtara na nzọụkwụ 3 na Outlook. Dị ka ọ nwere niile natara data gị ochie OST faịlụ, ị nwere ike i copyomi chọrọ ihe ọhụrụ gị OST faịlụ dị ka mkpa.